Himalaya Dainik » ख्याल राख्नुहोस् ! यस्तो अवस्थामा पनि रहनसक्छ ‘गर्भ’
ख्याल राख्नुहोस् ! यस्तो अवस्थामा पनि रहनसक्छ ‘गर्भ’
मासिक स्रावको क्रममा ग र्भ रहँदैन भन्ने जुन धारणा छ, त्यो आफैमा सही छैन । कुनै सुरक्षा नअपनाई गरिने यौ न सम्पर्कले ग र्भ रहने खतरा रहन्छ
धेरैजसो महिलाको मासिक स्रावको चक्र २८ दिनको हुन्छ । यसमा ओभ्युलेशन अर्थात डिम्बोत्सर्जन प्रक्रिया २८ दिनको मासिक चक्रका बीच १४ औं दिनमा सुरु हुन्छ । यसमा पहिलो दिन २४ घण्टासम्म अण्ड जीवित रहन्छ । त्यसैगरी स्पर्म ५ देखि ७ दिनसम्म जीवित रहन सक्छ । यस प्रक्रियाको हिसाब अनुसार ओभ्युलेशन प्रक्रिया सबैभन्दा बढी सक्रिय १३ औं, १४ औं, १५ औं र १६ औं दिनको हुन्छ ।
धेरैजसो महिलालाई लाग्छ कि मासिक स्राव भएको बखत यौ न सम्पर्क राख्नु सुरक्षित हुन्छ । कन्डोम वा यस्तो कुनैपनि सुरक्षात्मक विधी नअपनाए पनि ग र्भ रहँदैन । तर, के यो सही होला ?
मासिक स्रावको क्रममा ग र्भ रहँदैन भन्ने जुन धारणा छ, त्यो आफैमा सही छैन । कुनै सुरक्षा नअपनाई गरिने यौ न सम्पर्कले ग र्भ रहने खतरा रहन्छ, मासिक स्रावकै बेला पनि । यद्यपि यस्तो संभावना भने न्युन मात्रामा हुन्छ । स्त्री रोग तथा प्रसुती विशेषज्ञहरुका अनुसार मासिक स्रावको बेला गरिने यौ न सम्पर्कका कारण १ देखि १५ प्रतिशतसम्म ग र्भ रहने संभावना हुन्छ ।
मासिक स्राव भएको अन्तिम दिन वा पाँचौ दिन यदि तपाईं बिना सुरक्षा विधी बिना नै यौ न सम्पर्क राख्नुहुन्छ भने ग र्भ रहने संभावना
अन्डाशयबाट अन्ड निस्कने प्रक्रियालाई ओभ्युलेशन अर्थात डिम्बोत्सर्जन भनिन्छ । डिम्बवही नली हुँदै अन्ड युट्रेस अर्थात ग र्भाशयमा पुग्छ । डिम्बवही नली त्यही स्थान हो, जहाँ स्पर्मको सम्पर्कमा आएर अन्ड फर्टिलाइज हुन्छ । यदि गर्भ धारण भएन भने अन्ड रक्तश्रावको रुपमा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । जसलाई मासिक श्राव भनिन्छ ।
मासिक स्रावको ग्याप २२ दिन भन्दा कम भएमा मासिक स्राव लगत्तै ओभ्युलेशन हुन्छ । यो ग्याप केवल तीन वा चार दिनको हुनसक्छ । यसको अर्थ मासिक स्राव भएको अन्तिम दिन वा पाँचौ दिन यदि तपाईं बिना सुरक्षा विधी बिना नै यौ न सम्पर्क राख्नुहुन्छ भने ग र्भ रहने संभावना हुन्छ ।
एक सर्वेक्षणका अनुसार मासिक श्रावको बेला पुरुषहरुले कन्डोम प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा दुबैलाई केही किसिमाको सं क्रमण हुने भय रहन्छ । त्यसैले यस क्रममा यौ न सम्पर्क गर्दा कन्डोम प्रयोग गर्नु उचित र सुरक्षित हुन्छ ।